ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဒသမပုံမှန်အစည်းအဝေး နဝမနေ့ (၄. ၁၂. ၂၁၀၈) | Pyithu Hluttaw
(က)-စေတုတ္တရာမြို့နယ်မြောက်ပိုင်း မုန်းချောင်းအနောက်ဘက်ကမ်းရှိ သွားလာရေးခက်ခဲသော ကျေးရွာ ၁၉ ရွာ၏ လူမှုစီးပွားဘဝဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် မုန်းချောင်းအားဖြတ်၍ ကြိုးတံတား သို့မဟုတ် ဘေလီတံတားတစ်စင်း တည်ဆောက်ပေးရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း
(ခ)-ရှမ်းပြည်နယ် (တောင်ပိုင်း) နှင်‌့ (အရှေ့ပိုင်း) ကို ဆက်သွယ်ထားသည်‌့ သံလွင်မြစ်ကူးတံတား (တာဆန်း) အား တန်(၇၀) ခံခိုင်ဝန်ရှိသည့် အဆင်‌့မြင့်သံကူကွန်ကရစ်တံတားတစ်စင်း ထပ်မံတည်ဆောက်ပေးနိုင်ခြင်းရှိ/မရှိသိလိုခြင်းနှင်‌့ စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း
(ဂ)-လေရှီးမြို့နယ်၏ အဓိကပင်မလမ်းကြောင်းဖြစ်သော ထမံသီ-လေရှီး-အိန္ဒိယနယ်စပ်လမ်းကြောင်းပေါ်ရှိ ထမံသီ ချင်းတွင်းမြစ်ကူးတံတားအား မည်သည့်ခုနှစ်တွင် စတင်ဆောင်ရွက်မည်ကို သိလိုခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း
(ဃ)-ဒေါ်သန္တာ(အိမ်မဲမဲဆန္ဒနယ်) အိမ်မဲမြို့နယ်ရှိ ညောင်ကုန်းချောင်းဖျား-သရက်ကုန်းလမ်းကို ရာသီမရွေးသွားလာနိုင်သော လမ်းအဖြစ် ဆောင်ရွက်ပေးရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိ သိရှိလိုခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်းတဲ့မေးခွန်း
(င)-ရခိုင်ပြည်နယ်(မင်းပြား-မြေပုံ)မြို့ရွာချင်းဆက်လမ်းအား ကြပ်စင်တံတား ဖွင့်လှစ်ပွဲအမီ ကတ္တရာလမ်း အပြီး ခင်းပေးနိုင်ရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိတို့နှင့် စပ်လျဉ်းသည်‌့မေးခွန်း
(စ)-ရမ်းဗြဲမြို့နယ်အတွင်းရှိ ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန လမ်းဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ယူဆောင်ရွက် လျက်ရှိသော လမ်းများ ပျက်စီးနေမှုများအား မည်သို့ကြီးကြပ် ဆောင်ရွက်နေသည်ကို သိလိုခြင်းနှင်‌့ စပ်လျဉ်းသည့် မေးခွန်း
(ဆ)-တောင်ကုတ်မြို့နယ်အတွင်းရှိ နတ်မော်ကျေးရွာအုပ်စုမှ ကုလားရောင်ကျေးရွာအုပ်စုအထိ ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်းအား မြေသားလမ်းအဖြစ် ဆက်လက်ဖောက်လုပ်ခြင်းနှင့် မြေနီကျောက်ချောလမ်း အဖြစ် အဆင့်မြှင့်တင်ပေးနိုင်ခြင်း ရှိ/မရှိနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဒသမပုံမှန်အစည်းအဝေး နဝမနေ့ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းအကျဉ်းချုပ်